Google yakaburitsa yekutanga Beta yeApple 11 (inozivikanwawo sekuti Android R) uye parizvino inowanikwa yekuyedza, kusimudzira, uye mhinduro.
Ndezvipi zvinhu zvitsva mu Android 11?
Yakarongwa rima theme / modhi, skrini rekodhi, zvakagadzirwazve zviziviso, Apple's Airdrop-senge kugovera faira, maAPIs matsva, nyowani midhiya mutambi, mameseji mabhurawuni, nyowani simba menyu, mitsva ichangoburwa maapplication skrini, uye mvumo yenguva-imwe chete ndiwo akakosha maficha eApple 11 .
Ungaedza sei Android 11?
Kana iwe uri mugadziri kana anofarira, ungangoda kuyedza yazvino vhezheni yeApple 11. Kune parizvino nzira mbiri kunze uko kuyedza iyo Android 11 Beta. Nzira yakanakisa yekuyedza uye kuyedza Android 11 ndeyekuiisa pane inotsigirwa Pixel chishandiso. Asi ipapo havazi vese vane inotsigirwa Pixel mudziyo. Sarudzo inotevera ndeyokumisikidza iyo Android Emulator yekumhanyisa Android 11.
Parizvino, pamwe unoziva kuti kune akati wandei maEmulators kunze uko ekumisikidza nekumhanyisa Android pa Windows 10. Dambudziko nezvizhinji zveizvi nderekuti ivo havapi Android 11 parizvino.
Neraki, iwe unogona kushandisa yepamutemo Android Studio kumisikidza emulator kumhanyisa Android 11. Chikamu chakanakisa ndechekuti kumhanyisa Android 11 uchishandisa Android Studio kuri nyore zvakare.
Iyo Emulator inoteedzera zvishandiso zveApple (kune akawanda mafoni, mapiritsi, uye zvipfeko zvekusarudza kubva) pane yako Windows 10 kombiyuta. Inopa zvese kugona kweiyo Android kifaa. Unogona kuteedzera kufona, mameseji, kuyedza maapplication ako, kuwana iyo Play Store uye nekuita zvimwe zvakawanda.
Shandisa Android Studio kumisikidza Emulator kumhanyisa Android 11 Beta
Muchirongwa ichi, isu tinokuudza maitiro ekuisa iyo Android Studio uye nekumisikidza Emulator yekumhanyisa Android 11 Beta pane yako Windows 10 PC.
Step 1: kushanya ino yepamutemo kurodha peji ye Android Studio uye tora pasi kune yako Windows 10 kombiyuta. Saizi yekumisikidza iri padyo ne 900 MB. Saka zvinogona kutora chinguva kana iwe uri pane inononoka internet kubatana. Tinokurudzira kuti utore iyo inoitisa (.exe) panzvimbo yeiyo Zip vhezheni. Maitiro acho haana kunyatso kufanana kana uchiisa iyo ZIP vhezheni.
Step 2: Mhanya iyo yakadzorwa Android Studio setup faira. Kana iwe ukawana iyo UAC kukurumidza, tinya iyo Ehe bhatani kurega iyo inosimudza ichimhanya.
Step 3: Baya Next bhatani.
Step 4: Paunowana inotevera skrini, ita shuwa kuti zvese zviri zviviri Android Studio uye Android Virtual Chishandiso vakasarudzwa. Dzvanya iyo Next bhatani.
Step 5: Click Next pasina kuchinja chero chinhu kunze kwekunge iwe uchida kuchinja iyo yekumisikidza yekumisikidza nzvimbo, inova iyo drive kupi Windows 10 yakaiswa. Kubva pane zvatinoona, tinokurudzira kuti uiise padhiraivha iwe paunenge uine 10 GB yemahara nzvimbo. Kana iwe usina nzvimbo yakakwana, tarisa kune yedu 20 nzira dzekusunungura yekutyaira nzvimbo mu Windows 10 mutungamiri.
Step 6: Click on gadza bhatani. Kana kumisikidza kwapera, iwe uchaona iyo Inopera meseji. Dzvanya pane iyo Next bhatani.
Step 7: Pakupedzisira, tinya pane pedza bhatani.
Step 8: Kudzvanya bhatani reKupedzisa kunozozvimisikidza yega Android Studio chirongwa. Kana zvisiri, manisa kuvhura zvakafanana uchishandisa Start / taskbar yekutsvaga. Ndokumbira utarise kuti iyo Android Studio inogona kutora miniti kuvhura kekutanga. Saka mirira imwe nguva kana ikasatanga pakarepo.
Step 9: Kana iyo Android Studio yatanga, iwe unowana inotevera dialog bhokisi. Sarudza default Usapinze marongero bhatani redhiyo. Dzvanya OK kuenderera mberi.
Step 10: Paunowana inotevera skrini, tinya chero Tumira nhamba dzekushandisa kuGoogle or Usatumira bhatani zvichienderana nemaonero ako pane zvakavanzika zve data.
Step 11: Tevere, iyo Yekutambira hwindo ichaonekwa kumusoro. Dzvanya Next kuenderera mberi.
Step 12: Pa Isa mhando chidzitiro, tinya Standard radiyo bhodhi.
Step 13: Sarudza iyo UI maitiro. Chero sarudza default mwenje mode kana iyo yakasviba modhi (Darkula) zvinoenderana nezvinodiwa.
Step 14: Tevere, iwe uchaona iyo Tarisa uone marongero peji. Dzvanya iyo pedza bhatani. Android Studio ichatora zvimwe zvakakosha zvinhu. Izvi zvinogona kutora nguva. Kana iwe ukaona iyo UAC yekukurumidza, tinya iyo Ehe bhatani.
Step 15: Paunenge wapedza, tinya pane pedza bhatani.
Step 16: Iwe zvino uchaona iyo Welcome ku Android Studio dialog. Pano, Dzvanya pane iyo configure (gear) icon uye wozosarudza AVD Maneja kubva pakurongwa.
Step 17: Kuita izvi kunovhura iyo Android Virtual Dhijitari Maneja windows Pano, tinya pane iyo Gadzira Virtual Chishandiso bhatani.
Step 18: Pano, sarudza foni kana piritsi kubva muchikamu chinyorwa. Sarudza foni kubva pane zvakanyorwa. Kana uchisarudza Hwendefa, tinokurudzira Nexus 10.
Step 19: Pane iyo System Image hwindo, sarudza R kubva pane runyorwa wobva wadzvanya iyo Download batanidza padyo nayo.
Step 20: sarudza Bvuma uye ipapo chengeta Next. Android Studio ikozvino ichatora iyo Android 11 (R) mufananidzo kubva kuGoogle. Saizi yemufananidzo iri nezve 1.1 GB.
Paunenge wapedza, tinya pedza bhatani.
Step 21: Kubaya Finish bhatani kunozokudzosera kuinotevera hwindo. Pano, iwe unofanirwa kusarudza R kubva pane runyorwa wobva wadzvanya iyo Next bhatani.
Step 22: Pane iyo Verify Configuration skrini, tinya iyo pedza bhatani.
Step 23: Iwe uchawana izvozvi Yako Virtual Midziyo hwindo. Pano, tinya (girini) tamba bhatani padivi pekupinda kuvhura emulator.
Step 24: Iyo emulator inogona kutora chinguva kutanga iyo Android 11 kana Android R. Inoda huwandu hwakawanda hweesisitimu zviwanikwa. Saka isu tinokukurudzira kuti uuraye mamwe mapurogiramu uchimhanya Android Studio. Isu tinokurudzira kuti utarise Performance tab muTask Manager kuti uone mashandisirwo ezvekushandisa uye ekupedzisa zvirongwa kana zvichidikanwa.
Uchishandisa Emulator kuyedza Android 11
Step 1: Kutanga Android Studio.
Step 2: Paunowana dialog inotevera, tinya pane iyo configure (giya) icon uye wobva wadzvanya AVD Maneja. Izvi zvichavhura rako reVirtual Devices hwindo.
Step 3: Click on tamba bhatani padivi pekupinda (kana pinda-pinda pakapinda) kuti utange emulator.
Step 4: Android 11 inogona kutora chinguva kubhoot kumusoro uye kumhanya. Paunenge uchishandisa iyo Emulator, tinya pane iyo yakawanda icon (…) pane maturusi menyu kuti uwane iwo Emulator marongero.
Step 5: Kuti uvhare pasi Android, tinya pane icon yemagetsi. Kudzima Emulator, tinya padyo icon.
Uninstall Android Studio kubva Windows 10
Step 1: mhando Appwiz.cpl mune Start / taskbar yekutsvaga munda uye rova ​​iyo Enter kiyi yekuvhura Zvirongwa uye Zvimiro hwindo.
Step 2: Kungofa pane iyo Android Studio yekupinda uye tinya iyo Uninstall kuita.
15 akanakisa emulators eApp for PC uye Mac ye2020
Aya ndiwo akanakisa PUBG Mobile emulators izvozvi